Erling Haaland Oo Si Aanad Rumaysan Karin Ku Ceebeeyeen Dhamaan Weerarka Kooxda Doonaysa Ee Real Madrid. - Gool24.Net
Erling Haaland Oo Si Aanad Rumaysan Karin Ku Ceebeeyeen Dhamaan Weerarka Kooxda Doonaysa Ee Real Madrid.
Iyadoo ay maqan tahay kubadda cagta sababo la xidhiidha xanuunka Korona, waxa jira xogo kala duwan oo laga samaynayo dhinacyada ciyaaryahanada iyo kooxaha iyadoo uu haatan soo baxay isbar-bardhig lagu sameeyay Real Madrid iyo Erling Haaland oo lala xidhiidhinayo.
Real Madrid ayaa lala xidhiidhinayaa saxeexa Haaland walow uu bishii January uun ku biiray Dortmund, 19 sano jirkan ree Norway ee xilli ciyaareedkan qaabka duufaanta kusoo baxay ayaa loo arkaa bedelka mudada dheer ee Karim Benzema.
Kooxda uu hoggaaminayo tababare Zinadine Zidane ayaa kusoo dhibtoonaysay weerarka iyo gool dhalinta tan iyo markii uu baxay Cristiano Ronaldo sanadkii 2018 iyadoo Gareth Bale uu tan iyo bixitaankii xiddiga ree Portugal ku fashilmay inuu is muujiyo.
Isbar-bardhiga haatan lagu sameeyay Haaland goolashiisa xilli ciyaareedkan iyo goolasha ciyaaryahanada ugu goolasha badan Real Madrid xilli ciyaareedkan ayaa ah mid ceeb ku ah Los Blancos.
Intii lagu gudo jiray wakhtiisii RB Salzburg ee horraantii 2019-20 ilaa tan iyo bishii January markii uu usoo wareegay Borussia Dortmund, Haaland ayaa magaciisa kusoo qoray 40 gool.
Dhinaca Los Blancos xiddiga kaliya ee doorkiisa qayb ka qaatay ayaa ah Karim Benzema oo isagu ah ciyaaryahanka ugu goolasha badan kooxdaas doorkan isaga oo 19 gool kasoo dhaliyay tartamada oo dhan.
Dhinaca kale Gareth Bale oo xilli ciyaareed kale oo qalbi jab leh qaadanaya ayaa soo dhaliyay saddex gool halka ninka aan sida wanaagsan ula qabsan Real xilli ciyaareedkiisii koowaad ee Luka Jovic uu kaliya laba jeer shabaqa tagay.
Sergio Ramos oo ah kabtanka iyo daafaca dhexe ee kooxda ayaa goolashiisa la xisaabiyay maadaama oo uu rigooraha tuuro waxaana uu soo dhaliyay toddoba gool oo shan kamid ahi gool kulaadyo yihiin waxaana ay isku goolal yihiin Rodrygo Goes oo isaguna 7 leh.
Ugu dambayn, ciyaaryahanka rajada balaadhan laga qaban lana filayay inuu buuxin doono kabihii Ronaldo ee Eden Hazard ayaa ilaa haatan kaliya hal gool xilli ciyaareedkan kasoo dhaliyay waana tiro naxdin ku ah xiddig heerkiisa oo kale jooga.